Osimiri Mansilla hapụrụ obodo nke ụkọ mmiri kpuchitere | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ọkọchị ahụ mere n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya emeela ka ọkwa ọtụtụ ọdọ mmiri na Spen belata. Karịsịa ọdọ mmiri Riojan Mansilla nke dị ala karịa ka ọ dịbu. Naanị na 14,7% nke ikike ya, Ọdọ mmiri a zoro n'azụ mmiri ya bụ obere obodo mebiri emebi kemgbe 1960.
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ụkọ mmiri na mmiri dị ala, ndị Mansillan nwere ike ịgagharị n'obodo ahụ apụtala. Oké ọkọchị pụrụ ibibi nnukwu ọdọ mmiri dị ka anyị na-ahụ.
1 Oké ọkọchị na mbibi nke ọdọ mmiri
2 Tupu iwu ọdọ mmiri ahụ
Oké ọkọchị na mbibi nke ọdọ mmiri
Dị ka ọ na-adịkarị, ụmụ amaala Mansilla de la Sierra na-asa ahụ n'oge ọkọchị ọ bụla na mmiri ahụ iji nyere aka luso oke okpomọkụ. Otú ọ dị, unwu ala enyeghi ohere ịsa ahụ ntụrụndụ n'afọ a, ma enyela ndị ọbịa ya njem ije n'okporo ámá nke obodo ochie ugwu.
Obodo "achọpụtala" site na iwepụ mmiri nke esite ọ nwere ndị bi na 600 ma bụrụkwa onye isi mpaghara ahụ, jiri ya tụnyere 71 ugbu a.
Obere snow ole na ole n’oge oyi gara aga na enweghị mmiri ozuzo n’ime ọnwa ndị gara aga agbadatala ọkwa mmiri n’ogo akụkọ ihe mere eme, yabụ n’ọnwa a ị ga-ahụrịrị obodo ahụ dum, ma jee ije n’okporo ámá ya na n’ámá ya n’enweghị nsogbu.
Tupu iwu ọdọ mmiri ahụ
Themụ amaala niile nke Mansilla de la Sierra nwere ihe karịrị afọ 60 enweela ike ịmata obodo a dum. N'ịbụ ndị nwere mkpebi iwu iwuru mmiri mgbochi mmiri maka mmiri na mmiri, ndị Mansillans ga-ahapụ obodo ahụ iji nwee ike igbochi mmiri niile.
Ndị okenye Mansillans na-ejegharị n'okporo ámá nke obodo ha na-enwe obi ụtọ ma gwa ụmụ ụmụ ha ebe ụlọ ha dị ma na-awagharị ogologo oge.
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ihe omume dị ịtụnanya, tụlee ịdị mkpa nke okwu a na ihe nke a pụtara: oké ọkọchị dị ka ị hụtụbeghị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọdọ mmiri nke nwere ike 14% nke, n'ezie, ọ bụghị ihe niile nwere ike iji rụọ ọrụ, n'ihi ogologo ọkọchị na ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Osimiri Mansilla na-ahapụ obodo nke ụkọ mmiri ozuzo kpuchiri
Okpomoku nke uwa gha eme ka elu ikuku rurie elu dika 6%